दशै र दण्डवत आशनको चर्चा::mirmireonline.com
आ. व.: ०७४/०७५ | दर्ता न: १७८/०७३/०७४ | प्रबन्ध निर्देशक: सिर्जना तिमिल्सिना, सम्पादक: वाशुदेव तिमिल्सना | सोम, कार्तिक ५, २०७५
दशै र दण्डवत आशनको चर्चा
यस पटक पनि अरु बेला जस्तै दशै आयो । खाने पिउने रमाईलो गर्ने टिका जमरा लगाउने प्रचलन अनुसार यो क्रम रह्यो नै । तर यस पटक राष्ट्रपतिको टिका प्रदान र त्यसमा सहभागी केही विशिष्ट व्यक्तिको आशनले चर्चा पायो ।
२०६४ साल चैत्र तिर जनदिशा दैनिकले तात्कालीन एमाले महासचिव माधव कुमार नेपालले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको पाउमा लम्पसार परेको तस्वीर र समाचार प्रकाशित गरेको थियो । जुन तस्वीरले निकै चर्चा पाएको थियो । नभन्दै उनी त्यस पटक काठमाण्डौं क्षेत्र नं २ बाट तात्कालीन माओवादीका झक्कु प्रसाद सुवेदीसगँ पराजीत भए पनि निर्वाचनमा ।
राजतन्त्र रहुञ्जेल प्राय राजालाई भेट्ने नेताहरु यसरी नै निहुरिन्थे होलान् । यो सामन्ति युगको प्रतीक थियो भनेर त्यसका विरुद्ध गणतन्त्र ल्याउने आन्दोलन भयो ।
सामन्ति व्यवस्थाको प्रतीक मानिएकाले त्यो संस्कारै थियो होला ।
तर अहिले त गणतन्त्र भनिएको छ । त्यसमा पनि कम्युनिष्ट समाजवादीहरुको नेतृत्वको सरकार , कम्युनिष्टहरुले चयन गरेको राष्ट्रपति ।
राष्ट्रपतिले पनि विगतमा राजाले जस्तै सर्वसाधारणलाई टिका लगाउने प्रचलन यथावत राखियो । त्यति मात्रै कहा होर वडा अध्यक्ष देखि प्रधानमन्त्री सम्मले जनताको नाममा टिका लगाउने कुरा त कति आयो कति ? अझ प्रधानमन्त्रीले त दिनै पिच्छे बालुवाटारमा टिका लगाउने क्रम रोकिएको छैन ।
यी सबै भन्दा फरक चर्चाको विषय रह्यो शीतल निवासको एउटा टीकाको दृष्यको । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको हातबाट टीका जमरा लाउन पुगेका थिए पुर्व प्रधानन्यायधीश गोपाल पराजुली । उनले राष्ट्रपतिको अगाडी प्रस्तुत हुदा पुरै घुडा टेकेर झुकेका छन् । यो तस्वीर र यसबारे प्रतिकृयाहरु अहिले सामाजिक सञ्जालमा व्याप्त छन् ।
व्यक्तिगत रुपमा पहिला राजाकोमा निहुरेर जाने गरेको अनुभवका कारण हुन सक्छ या अग्लो भएकाले राष्ट्रपतिको श्वास्थ्यलाई ख्याल गरेर आफै निहुरिउ भन्दा त्यस्तो दृष्य कैद भएको होला या जे सुकै होस् । यो एउटा दृष्य हो जसले समाजको मन छोयो । यस्तो पोजिसनमा टिका थाप्ने पनि हासेकै देखिन्छ र टिका लगाईदिने राष्ट्रपति पनि मुस्कुराएकै देखिन्छ । यसले युवाहरुलाई लाग्यो यो पुरानो सामन्ति संस्कारको प्रतिविम्व हो । यस्तो आसनमा मानिसलाई प्राय उहिले सजाय दिलाउन , माफी मगाउन लगाउने चलन थियो ।
दशैमा मान्यजनले टिका लगाउने आम प्रचलन हो । तर के राष्ट्रपतिले सर्वसाधारणका नाममा दिनभर टिका लगाउने हाम्रो संस्कार नै यसमा दोषी हैन र ? २१ औं शताव्दीमा त्यसमा पनि धर्म निरपेक्ष देशमा स्वेच्छाले टिका आदान प्रदान गर्न सकिन्छ तर बाध्यता जस्तो बनाएर सबै कर्मचारी, पुर्व कर्मचारीलाई टिका शीतल निवासको दैलोमा पुग्ने संस्कारै बदल्न पाए आगामी दिनमा यस्तो दृष्य देख्न पाईने थिएन होला ।
टिका लगाईदिने र थाप्नेले पनि यो दण्डवत आशनबारे गंभीर हुनु पर्छ है । यस्तो फेरी देख्न नपरोस् ।